KONKE ODINGA UKUKWAZI NGE-PPTP VPN - KUXHASWE
Konke Odinga Ukukwazi Nge-PPTP VPN
Khomba ku-Tunnel Tunnel noma ku-PPTP umthetho olandelwayo owakhelwe ukusetshenziswa okulula kwe-VPN. Itholakala ekusebenzeni okuhlukahlukene, kuya ngabathengisi laphaya. Ngaphandle kokuba ubuchwepheshe be-VPN obudumile futhi obusheshayo, kukhombise ukuthi abuphephile kakhulu. Ngakho-ke, lapha sizobheka I-PPTP VPN futhi ubone ukuthi kuhamba kanjani ngokumelene nezinye izinhlobo ze-VPN.
Okuqukethwe umbukiso 1 Yini i-PPTP VPN? 1.1 Isebenza kanjani i-PPTP VPN? 1.2 Umehluko phakathi kwe-PPTP VPN nezinye izinhlobo ze-VPN
Yini i-PPTP VPN?
Uma sikhuluma I-PPTP VPN , iqiniso elikhulu eliphuma ukuphepha kwalo okungekuhle. Isizathu esikhulu salokhu ukuthi indlela esetshenziselwa ukubethela nokufakazela ubuqiniso isengozini enkulu kulolu hlobo lwe-VPN. Kube nemizamo eminingi yokulungisa ukuphepha kwe-PPTP VPN ngoba iyona elula kunazo zonke okufanele isetshenziswe.
Kodwa-ke, ihlale ikhona futhi isabonisa ukukhubazeka okukhulu, yingakho kungebona ubuchwepheshe obunconyelwa kakhulu be-VPN uma ukuphepha kuyinto oyikhathalela kakhulu. Lokho kusho, kunendlela yokwenza i-PPTP VPN iphephe kakhulu ukuthunyelwa.
Kungenxa yokuhlanganisa i-PPTP VPN nge-Transport Layer Security noma i-TLS. Okujwayelekile okusebenzayo yi-Secure Sockets Layer noma i-SSL lapho i-PPTP ingavikelekile kangako. Kepha ukuyiguqula ibe yi-TSL kungadinga ukuthi yonke ingqalasizinda ye-PKI ishintshe. Lesi yisona sizathu esikhulu esenza abaningi bangayi kule nketho.
Manje njengoba sesiyazi ukuthi yini i-PPTP, kungani ithandwa nokuthi iyini iphuzu layo elibuthakathaka, manje sizobona ukusebenza kwe-PPTP VPN. Ake sithole ukuthi isebenza kanjani esigabeni esilandelayo.
Isebenza kanjani i-PPTP VPN?
I-PPTP isebenza ngesisekelo sezinto ezintathu, kufaka phakathi ukubethela, ukufakazela ubuqiniso, kanye nokuxoxisana kwe-PPP. Iphrothokholi ye-PPTP VPN ibhala ngemininingwane yedatha yomsebenzisi bese yenza amaphakethe amaningi aleyo datha. Lawa maphakethe enziwa ngokwakha umhubhe wokuxhumana okuphephile nge-LAN noma i-WAN.
Le datha ayigcini ngokuthungwa kuphela kepha ibethelwe futhi idinga ukufakazelwa ubuqiniso, okwenza ukuthi iphephe ngandlela thile kunokuphequlula okungavikelwe kuwebhu ejwayelekile. Kodwa-ke, uma siyiqhathanisa nezinye izinhlobo ze-VPN, yiprotocol ye-VPN ephephe kakhulu. Ubuchwepheshe buphelelwe yisikhathi futhi abukho sezingeni eliphezulu, obenza bube namaphutha futhi bungavikeleki.
Manje, sizoqhubeka nokuqhathanisa kwethu i-PPTP VPN nezinye izinhlobo ze-VPN. Sizobheka kakhulu ukubhekisa kwezokuphepha, kepha sizobuye sihlanganise nokunye umehluko.
Umehluko phakathi kwe-PPTP VPN nezinye izinhlobo ze-VPN
Umehluko omkhulu phakathi kwe-PPTP VPN nezinye izinhlobo ze-VPN ukuphepha. Njengoba kushiwo ngaphambili, i-PPTP VPN ikhonjiswe ukuthi ayivikelekile ngenxa yendlela yayo ebuthakathaka yokubethela nokuqinisekisa. Ngeke kube yiphutha uma sithi kungenye yezinhlobo ezibuthakathaka kakhulu ze-VPN phakathi kwazo zonke.
Kodwa-ke, uma kukhulunywa ngejubane, i-PPTP VPN ingenye yezinto ezinhle kakhulu. Kungenxa yokubethela okusezingeni eliphansi okufanele ikunikeze. Ngaphezu kwalokho, kulula kakhulu ukumisa futhi kuhambisane kakhulu netoni yamadivayisi. Kulula kakhulu ukuthi ngisho umuntu onobuhlakani onobuhlakani angakwazi ukumisa umthetho olandelwayo kunoma iyiphi idivayisi ngaphandle kwenkinga enkulu.
Isivinini nokuhambisana yizizathu ezimbili ezibalulekile zokuthi kungani abahlinzeki abaningi be-VPN abaphezulu beqhubeka nokunikela nge-PPTP protocol kanye nezinye izinketho eziphephe kakhudlwana. Imvamisa kunconywa cishe wonke umuntu ukuthi abasebenzisi be-VPN akufanele basebenzise umthetho olandelwayo we-PPTP VPN futhi kufanele bahambele umthetho olandelwayo we-OpenVPN ngenxa yejubane elihloniphekile kanye nokuvikeleka okuphezulu.
Kepha kusenabasebenzisi abangahle bathole ukusetshenziswa kwe-PPTP kwezinye izinjongo, njengokusakaza, ukulanda, noma ukugembula, ngenxa yejubane elisheshayo.
Ukusonga Izinto Phezulu
Uma ufuna ukuphepha okuqinile nobumfihlo kuwebhu, ngakho-ke kungcono ukuthi usebenzise umthetho olandelwayo we-OpenVPN. Ukusebenzisa i-PPTP kungakubeka engcupheni ngoba ibuthakathaka maqondana nokubethela nokuqinisekisa ekunikezayo. Kodwa-ke, uma udinga isivinini esisheshayo, i-PPTP ukubheja kwakho okuhle kakhulu.
Ngakho-ke, lapho unayo! Manje uyazi ngokuphepha kwe-PPTP VPN nokuthi kuqhathaniswa kanjani nezinye izinhlobo ze-VPN.
windows 10 qala isixazululi nkinga semenyu
windows 10 unqamula njalo i-wifi
ayikwazi ukubuyekeza windows 10 1903
ukufaka kabusha abashayeli behluzo windows 10
izithombe zigcina zishayisa amawindi 10